पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन : आजको राशिफल : बि.सं. २०७४ साल फाल्गुन २ गते बुधबार तदानुसार फेब्रुवरी १४ तारीख « Light Nepal
पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन : आजको राशिफल : बि.सं. २०७४ साल फाल्गुन २ गते बुधबार तदानुसार फेब्रुवरी १४ तारीख
Published On : 14 February, 2018 12:07 am
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल फाल्गुन २ गते बुधबार इश्वी सन २०१८ फेब्रुवरी १४ तारीख फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथी चन्द्रमा मकर राशिमा सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु प्रणय दिवस – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
मेष राशि – चु, चे,चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ
मान प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग रहेको छ । आफ्नो कुसलताले गर्दा आम्दानिको क्षेत्र सबल रहने छ । आफन्त जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पुग्नेछ । प्रिय खबरले मन प्रशन्न रहनेछ । प्रेम सम्बन्धमा भने सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला ।
हराएको माल सामान फेला पर्न सक्छ । पारीवारीक मनोरञ्जनको निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । कार्य सम्पादनमा ढीलाई हुनाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । मान्यजनको सहयोगमा गरीएका कार्यले दीगो फाईदा दिलाउनेछ ।
सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मानसिक चिन्ता उत्पन्न हुनेछ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । शारीरिक आलस्यातले गर्दा गरीरहेको काम को क्षेत्रमा अपजस सहनु पर्ला । बादबीबादको सामना गर्नु पर्नेछ ।
आय आर्जनमा बृद्यि गर्नका लागि तपाईले बढी परीश्रम गर्नु पर्न सक्छ । बौधिक क्षेत्रको बिकाशले तपाईको मान सम्मानमा बृद्यि गर्नेछ । कार्य क्षेत्रको गडबढीले गर्दा मनमा सामान्य डरको बास रहनेछ । बिद्या तथा सन्तान शुख प्राप्ति हुने योग रहेकोछ ।
आफ्नै घमन्डका कारण दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सामान्य खराबि उत्पन्न हुन सक्नेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोग मा समय ब्यतित रहन सक्छ । प्रिय खबर द्वारा मन प्रशन्न रहला । नयाँ योजनाका साथमा गरीएका कामहरु सफल हुनेछन ।
आफन्तजन बिचको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । मित्रहरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि आई पर्न सक्नेछ । साजेदारी काममा लगानी नगरैकै बेश हुनेछ ।
मान प्रतिष्ठामा बृद्यि हुने योग रहेको छ । मनमा आट र शाहस को कमिले कार्य सम्पादनमा झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । यात्रा मनोरन्जन पुर्ण रहनाले मन प्रशन्न रहला । दाजु भाई तथा मित्र जनहरु सँगको सम्बन्ध टाढिन सक्छ ।
आय आर्जनको लागी राम्रो समय रहेता पनि सामान्य खर्च हुन सक्छ । नयाँ मित्र सगँको भेट वा प्रिय खबरले मन प्रशन्न रहनेछ । तपाईको सानो कमजोरीको फाईदा अरुले लिन सक्ने छन् । यात्रा फाईदा मुलक हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल पुष २६ गते विहिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल पुष २४ गते मँगलबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”